Rasaasa News – Waa Kuma Cabdiqadir Xaaji Maxamed Dhaqane, Maxaase ka Jira Eeda ku Saabsan Afduubka Xubno ONLF, Xageese Jooga?
Waa Kuma Cabdiqadir Xaaji Maxamed Dhaqane, Maxaase ka Jira Eeda ku Saabsan Afduubka Xubno ONLF, Xageese Jooga?
on February 6, 2014 2:50 pm
Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Dhaqane, waa siyaasi Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gabalada Jubooyinka, gaar ahaana degmada Faxfax-Dhuun, ee gabalka Jubada dhexe.
Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Dhaqane, waxaa uu ka mid ahaa xubnihii ugu cad cadaa Maxkamadihii Islaamka Soomaaliya. Waxaa kale oo uu ka mid ahaa ururkii dibu xoraynta Soomaaliya [SRA] ee sida wayn uga soo horjeeday siyaasada Atoobiya. Cabdiqaadir Xaaji Maxmed Dhaqane waxaa uu ka mid ahaa dawladii uu Sheekh Shariif madaxda ka ahaa.
Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Dhaqane, xiliyadii u dambeeyey wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta baagamuudada ah ee Soomaaliya, kuwaas oo ku xoonsan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Dhaqane, waxaa uu ka mid ahaa waftigii Jubaland ee Jijiga kaga qayb galay xuskii qoomiyadaha Atoobiya December 8, 2013 [Hidhaar 29, 2006 EC]. Intii uu joogay Cabdiqaadir Jijiga waxay is arkeen dhawr goor si gooni gooni ah iyo si guudba Madaxwaynaha degaanka Somalida Atoobiya Cabdi Maxamuud Cumar. Lamana sheegin waxa kulankooda Jijiga ku saabsanaa.
Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Dhaqane, waxaa uu 26/1/2014, martiqaad qado u sameeyey Sulub Cabdi Axmed oo ay saaxiib ahaayeen, lama sheegin in uu Cali Dheer martiqaaday, laakiin waxaa la xaqiijiyey in uu la qadeeyey labada nin. Maalintaas ayaa ugu dambaysay araga saddexda nin ee wada qadeeyey.
Ururka ONLF, waxay sheegeen in Atoobiya ay afduubtay xubno ONLF ah, oo uga qayb galayey wadahadal ay sheegeen in uu labo goor oo hore ka dhacay Nairobi.
Cabdinuur Cabdulahi Faarax [Cabdinuur Yare], oo hore u ahaan jiray golaha dhexe ee ONLF, fadhigiisuna ahaa Kenya, oo sheegtay in uu yahay la taliyaha Madaxwaynaha dawlada degaanka Somalida Atoobiya, waxaa uu VOA, u sheegay 1/02/2014 in Sulub iyo Cali Dheere joogaan degaanka kana soo goosteen ururka ONLF.
3/2/2014 – Ciidamada booliska Kenya ayaa qabtay labo sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska Kenya, kuwaas oo lagu eedeeyey in ay ku lug lahaayeen afduubka labo xubnood oo ONLF, oo ay sirdoonka Atoobiya ka kaxaysteen Nairobi 26/01/2014.
3/2/2014 – Afhayeenka dawlada Atoobiya Shimelis Kemal, ayaa u sheegay Associated Press [AP] in dawlada Atoobiya ayna waxba kala socon afduubka la sheegay.
Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Dhaqane, wuu maqan yahay mooyee, inta ay socotay raacdaynata xubnahan la afduubay waxa war ah iyo meel uu joogo midna lama maqal, laakin waxaa xaqiiq ah in uusan joogin Nairobi.
5/02/2014 – Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Dhaqane, waxaa lagu arkay magaalada Addis Ababa. Waxaa kale oo la sheegay in kulamo ay wada qaateen madaxwaynaha degaanka Somalida Atoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo mudo dhawr bari ah jooga Addis Abab.
Warbaahinta ONLF, ayaa si kooban wax uga qortay in afduubka xubnaha ONLF,uu ku lug leeyahay Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Dhaqane.
ONLF, kolka laga tago khaladaadka hogaaminteeda iyo nacaybka ay ka kasbatay dadwaynaha, waxay u dagaalantaa dan guud oo helideeda qof walba jecel yahay. Waxaa jira dhaqan Soomaliyeed oo ah Idil Cadowse ha ii Loogin!
Hadii uu Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Dhaqane, ku lug leeyahay qabashada xubnaha ONLF, yahayna siyaasi Soomaaliyeed sokeeyana la ah xubnaha loo geeyey cadowga, waxaad iswaydiin kartaa waxa ku kalifay Cabdiqaadir in uu qaado talaabadaas?